iPhone Ga-Weghachi? Lelee Solutions
1 Naghachi iPhone Data
Naghachi iPhone iMessages
Naghachi iPhone Ozi
Naghachi iPhone Ibe edokwubara
Naghachi iPhone Voice Memo
Naghachi iPhone Kalinda
Naghachi iPhone MMS
Naghachi iPhone Nchetara
2 iPhone Iweghachite Software
3 iPhone Nchọpụta nsogbu
iOS 9 na mgbake mode
Naputa site na Nwụrụ Anwụ iPhone
Etinye iPhone na mgbake mode
iPhone Notes Icon Na
n iPhone White ihuenyo nke Ọnwụ
iPhone Nọgidesiri na mgbake mode
Naputa site na Broken iPhone
Naputa site na Water mebiri emebi iPhone
iPhone Nọgidesiri na Apple Logo
iPhone na mgbake mode
Ngwọta na-Idozi iPhone Ga-Weghachi Nsogbu
Nso nso m hụrụ na ọtụtụ ndị mere mkpesa na ha iPhone agaghị weghachi. Ụfọdụ iPhone agaghị weghachi mgbe iOS 9.0.2 update; Ụfọdụ iPhone agaghị weghachi n'ihi njehie, ka njehie 21; Ụfọdụ iPhone agaghị weghachi ma araparawo Iweghachite ọnọdụ, na ụfọdụ ndị mmadụ na ọbụna kwuru na iTunes apụghị ịmata iPhone dị na Iweghachite ọnọdụ. M anakọtara mkpa na-Mata ọmụma na anya niile agbanwe agbanwe, ọ chọpụtara na nke dị iche iche ọnọdụ, ị kwesịrị ị na-etinye ngwọta ndị dị iche dozie iPhone agaghị weghachi nsogbu. Lelee nri ngwọta n'okpuru dị ka ọnọdụ gị.
iPhone Ga-Weghachi mgbe Update
Mgbaàmà: Ọ mere ihe niile dị mkpa maka update, mgbe ahụ, jụrụ ọrụ jikọọ iTunes. Otú ọ dị, mgbe ọrụ jikọọ iPhone na ẹkedori iTunes, ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ. Na ihuenyo nke iPhone, ọ ka na-egosi jikọọ iTunes.
Ngwọta: na nke a, ọ pụtara na gị iTunes apụghị ịmata gị iPhone. E nwere ihu ọma 2 ihe mere: na iTunes abụghị ọhụrụ version na gị nche software (mgbochi nje software) dị nnọọ blocks gị iTunes si arụ ọrụ. Dozie nsogbu, akpa imelite gị iTunes ka ọhụrụ version na-eme ka gị nche software ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị arụ ọrụ, gbanyụọ gị iPhone> ikwunye na eriri USB kọmputa gị na ẹkedori iTunes> Jide Home bọtịnụ nke gị iPhone ole na ole sekọnd ruo mgbe ị na-ahụ Jikọọ na iTunes ihuenyo> Hapụ Home bọtịnụ na jikọọ gị iPhone ka eriri USB. Ọ bụrụ na iTunes achọpụta rụọ gị iPhone ịga nke ọma, ị ga-ahụ a ozi na-ekwu na iTunes ka ahụrụ ihe iPhone na mgbake mode. Mgbe ahụ ị pụrụ ịgbaso ozugbo iweghachi gị iPhone.
Unknown Error Ọnọdụ
Mgbaàmà: mgbe plugged n'ime ụgwọ, ọrụ ike na-ahụ naanị Apple logo na ihuenyo. Mgbe etinye iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ, ma iPhone apụghị-eweghachi ma ọ bụ emelitere na e nwere abịa na njehie ozi 21, 9006, 3200, wdg
Ngwọta: mgbe na-amaghị njehie etịbe, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ime ka doo anya ihe njehie pụtara. Ka ihe atụ, njehie 21 pụtara na ọ bụ a ngwaike nke. Na mgbe ahụ na-eso ngwọta Apple na-enye dozie nsogbu. Apple nyere a ndepụta nke njehie, ị nwere ike ịlele ha.
iPhone Ga-Rụchaanụ Iweghachi si iCloud
Mgbaàmà: Ihe niile yiri ka na-arụ ọrụ mgbe Iweghachi iPhone si iCloud. Otú ọ dị, ọ ka na-agwa na ọ bụghị na arụchaala Iweghachi n'okpuru Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Ozi kwuru 'Nke a iPhone ugbu a weghachiri eweghachi na ga-akpaghị aka ndabere mgbe e mere ya'.
Ngwọta: Ọ bụrụ na gị iPhone agaghị gụsịa weghachi si iCloud, ihe mbụ ị ga-eme bụ iji ego ma Wi-Fi jikọọ n'ụzọ ziri ezi. Ọzọ, ọ na-niile mara na na e nwere ahụhụ na iCloud na pụrụ ịkpata ọdịda nke mweghachi. Ya mere, na nke a, ị ga-agbalị iweghachi gị iPhone ọzọ ruo mgbe ọ na-okokụre.
iPhone Ga-Weghachi Mgbe Jailbreak
Mgbaàmà: Gbalịa weghachi a jailbroken iPhone na iTunes, nanị iji nweta ozi 'a na ngwaọrụ bụghị oruru maka rịọrọ Mee'.
Ngwọta: Iji weghachite a jailbroken iPhone, ị kwesịrị ị na apụ etinye iPhone n'ime DFU mode (Jide Ike bọtịnụ na Home bọtịnụ n'ihi 10 sekọnd, mgbe ahụ, ka na-aga nke Ike button mgbe aka iso jide n'ụlọ button ole na ole nke abụọ ruo mgbe unu iTunes ịchọpụta gị iPhone.) Ke iTunes Summary window, pịa Weghachi iPhone nhọrọ. Mgbe weghachi okokụre, kama nke iweghachi si a ndabere faịlụ, ị na-kwesŽrŽ ịtọ gị iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ka ọ dị mma. Dị ka data ekpe ke iTunes ndabere, i nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake) wepụ faịlụ na mbubata ha gị iPhone ọzọ.
10 Ihe ị pụrụ ime na ihe iPhone na Nwere Bad ESN ma ọ bụ Blacklisted IMEI
Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone 6 / 5S / 4S / 4 / 3GS
Otú nyefee SMS, Ndi ana-akpo na Ọzọ si Motorola ka iPhone
Olee otú Hichapụ Ndi ana-akpo si iPhone
Otú nyefee Data si gam akporo ka iPhone 6 / iPhone 6 Plus
> Resource> iPhone> Solutions idozi iPhone Ga-Weghachi Nsogbu